Fanadiovana :: Noesorina avokoa ireo mpivarotra nanerana an’Analakely • AoRaha
Fanadiovana Noesorina avokoa ireo mpivarotra nanerana an’Analakely
Nanao be midina vao maraina nanemitra ny nanerana an’Analakely ny ekipan’ ny kaominina Antananarivo renivohitra (CUA) niaraka tamin’ireo olon’ny Polisimpirenena, nanomboka tamin’ ny zoma alina. Raikitra ny fanadiovana faobe, nandritra an’ iny faran’ny herinandro iny, niainga teny Andohan’Analakely ka hatreny amin’ny gara Soarano.
Isan’ny natao tamin’izany ny fanentanana ireo mpivarotena, fanesorana ireo mpivarotra toaka amoron-dalana sy ny mpisotro toaka ao anaty fiara.
Nihatrana vao maraina (sabotsy) teny an-toerana ny Polisy monisipaly sy ny Polisim-pirenena niaraka tamin’ ny mpamonjy voina ary ny ekipa sasany tao amin’ny kaominina, nandritra ny fanatanterahana an’izao asa fanadiovana izao. Norarana, tsy toy ny isan’andro, ireo mpivarotra mameno fiantsonana hatrany ambanin’ny “Arcade”. Noesorina hatramin’ ireo mpanamboatra finday sy ireo fiara maty izay niantsona an-taonany teny an-toerana.
Natao ireo peta-drindrina mikasika ny toromarika miantefa amin’nyolona rehetra mandalo amin’iny toerana iny mba ho fanajàna ny fahadiovana sy ny fandaminana ny tanàna. Notohizana ihany koa ny fanentanana an’ireo mpandalo amin’ny fanajàna ny toerana fiampitana eny amin’ny arabe.
Famoahana sary mamoafady :: Mbola misy olona hafa karohin’ny zandary
Fanamboaran-dalana namoa-doza :: Roa lahy maty tototry ny tany tany Ankazondandy